पेरिस ओलम्पिकमा ब्रेक डान्स पनि! :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
पेरिस ओलम्पिकमा ब्रेक डान्स पनि!
सन् २०२४ मा फ्रान्समा आयोजना हुने पेरिस ओलम्पिकमा ब्रेकडान्स लगायत सर्फिङ, स्केटबोर्डिङ र क्लाइम्बिङ स्पर्धासमावेश गरिएपछि यसमा निकैरोचकता छाएको छ।
आयोजक फ्रान्सले अतिरिक्त खेलका रुपमा ब्रेक डान्सलाई अगाडि बढाएका कारण यसले नयाँ खेलको रुपमा प्रवेश पाउने भएको हो। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजना हुने सन् २०२४ को ओलम्पिक खेलमा ब्रेकडान्सलाई पनि प्रतिस्पर्धा हुने खेलको सूचीमा समावेश गरिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक समितिको बैठकद्धारा अनुमोदित सो निर्णयपछि सर्फिंङ, स्केटबोर्डिङ र क्लाइम्बिङ अन्तर्गतका प्रतियोगितालाई पनि पेरिस ओलम्पिक खेलमा समावेश गरिएका हुन्।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण आगामी वर्षको लागि स्थगित भएको टोकियो २०२० ओलम्पिक खेलमा पनि सर्फिङ, स्केटबोर्डिङ र क्लाइम्बिङका साथै करातेमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। तर ब्रेकडान्स भने ओलम्पिकले पहिलो पटक थपेको नयाँ स्पर्धा हो।
ओलम्पिक खेलहरुमा नयाँ र युवा दर्शकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ् ब्रेकडान्स जस्ता प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्न पेरिस ओलम्पिक आयोजक समितिद्वारा गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति समक्षलाई आग्रह गरिएको थियो।
थप खेललाई समावेश गर्नुका साथै भारतोलनका केही विधालगायत १० भिन्न प्रतियोगिता पेरिस ओलम्पिकमा आयोजना नहुने पनि निर्णय आइओसीले गरेको छ ।
साथै कुल १० हजार पाँच सय खेलाडी मात्र सहभागी हुने पेरिस ओलम्पिक खेलमा महिला र पुरूष खेलाडीबीच बराबरीको उपस्थिति रहने पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक समितिले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २३, २०७७, ०५:३१:००